MEDEVAC muAsia - Kuita Kurapa Kwechiremba muVietnam - Emergency Live
IATR42 ndeimwe yezvidzidzo zvepamusoro pakuita kubuda kwechiremba muVietnam
Kuita kurapwa kwechiremba chikamu chinokosha che dambudziko rinopindura. Izvo zvakaoma kuita sezvo ichi chinosanganisira kuoma uye kuoma. Zvinotora nezve 12 ku 14 vanopindura mhirizhonga kuvhomora munhu akabatwa, iyo pamwe chete inosanganisira boka rezvematongerwo enyika rezvematongerwo enyika, a mukoti uye boka rezvechiremba.
Muenzaniso wekurapa kubuda ndiko Extracorporeal Membrane Oxidation (ECMO) apo murwere anodiwa kuti atamire kune imwe nzvimbo iyo mwoyo yavo yakabviswa kubva mumuviri wavo. ECMO inofanidza chiito chemwoyo nemapapu apo nhengo dzomurwere dzinodonhedzwa.
Murwere anowanikwa neEECMO anonamatira pamucheka pakati pehupenyu nerufu. Icho chinoreva kuti nhengo dzavo hadzikwanise kuisa pape ropa zvakanaka, saka kubatana kwe medical device kuitira kuti titevedze basa remuganda. Mushure mekunge mwoyo wakasungwa, mwoyo unenge wakabatana nemichina mukutarisira kuti, pamwe nenguva yekuzorora nekudzorera utano, Zvinhu zvichadzoka kune zvakasikwa, saka mwoyo unokwanisa zvakare kubatanidzwa zvakare mumuviri. Zvisinei, pane nguva apo murwere achange aida kurapwa kwakanyanyisa kusingawaniki Vhetinamu; mune izvi, murwere anofanira kutamirwa kune dzimwe nyika.
Chekutanga ECMO medevac mhosva yaiva murwere weRussia uyo akadonha paTan Son Nhat Airport, Vietnam. Murwere akakurumidza kuenda kune Heart Center muSaigon, asi zvakajeka kuti murwere angada kutarisirwa kubva kune imwe nzvimbo yakakura kunze kwenyika. Panguva iyoyo, pakanga pasina vadzidzisi vakarovedzwa munharaunda avo vaiva nekwanisi yekuita ECMO medevac.
Vakapindura vanosangana nababa vemurwere, avo vakaenda kuVietnam. Vakapindura vakatsanangurira mamiriro ezvinhu kwaari uye kuti iyi yakanga iri nzira yakaoma iyo avo vakapindura vasati vamboita. Asi zvisingaiti, zvinotyisa zvikuru. Pashure pekukurukurirana, baba vakati: "Uyu ndiye mwanasikana wangu oga. Ingozi kwauri, asi mukana kwandiri. "
Pasina sarudzo dziripo, the vapindura vakasarudza kuti chinhu chavo chavanogona kuita chakanga chichibhururuka murwere pachavo. Zvipatara muBangkok vakati vaigona kubvuma murwere, chero bedzi murwere achitakurwa ikoko. Bangkok yakanga iri chisarudzo chechikonzero chokuti iyo yaiva nzvimbo neyo pfupi nzira. Zvakatora maawa mashanu kuti vapindura vatungamirire murwere kubva pamubhedha wake uye kuti vamugadzirire zvakare kumitambo yavo. Denga racho rakanga rine shongwe yezvigadzirwa kumusoro uye kumativi ose maviri.
Kupfurikidza neVietnam Airlines, avo vakatenga a Ndege yeATR, nendege ine musuo mukuru wekutakura, uye pamwe chete nevashandi vekumhanya kwemhepo vakagadziridza zvakare chikamu chemukati chegege, vachisiya chiwi chezvigaro mukatikati mechikamu kuitira kuti tambo yakagadziridzwa pamusoro, apo boka rekutsigira rakagara pa shure.
Dare racho rakatora kutiza nevanenge vashanu vachiremba uye mukoti. Vakanga vane injinjini yezvinyorwa, avo vaitonga magetsi-vaifanira kutakura mabhatiri akawanda-pamwe chete avo vaive neine technician yebazi nebato rinotakura, chero bedzi. Vakasvika muBangkok uye vakabudirira kuchengetedza murwere zvakanaka uye ari mupenyu.
The Thai Hospital yakaratidza kuva imwe dambudziko sezvo vasati vamboendesa murwere kubva kune imwe ECMO unit kusvika kune imwe. Zvakaipisisa, zviyero zvakanga zvisati zvakafanana. Saka, pamusoro pemakore matatu akatevera, vapindura vacho vaifanira kuzviitira. Murwere akagara muchipatara kwemwedzi mitatu, akapona, ndokudzokera kumba.
Singapore yekukurumidzira mishonga yekurapa
RETTmobil 2019 - The Fair of Life Savers yasvika